Qiimeynta Wadamada ugu Baasaboorka Ficaan Aduunka
Qiimeynta sanadlaha ah waxaa la soo saaraa bilowga bisha Janaayo, waxaa lagu soo bandhigay baasaboorka ugu fiican adduunka, kuwa dhexe iyo uguyaraan, waxaan eegeynaa isticmaalka & safarka.
Dhowr waddan ayaa kuraastooda iska tuuray sanadkii la soo dhaafay, gaar ahaan xayiraadda loo yaqaan ‘Covid-19’, oo meesha ka saartay dalxiisayaashii, safarradii aan dhammaadka lahayn & diyaaradoodii siday rakaabka kala duwan.
Liiska 10-ka dal ee ugu wanaagsan xagga baasaboorka sanadkan waa: 1. Japan, 2. Singapore, 3. Kaalinta saddexaad waa Kuuriyada Koofureed & Jarmalka, 4. Qiimeynta waxaa ku soo xiga Italy, Finland, Spain & Luxembourg, 5. to Denmark & ​​Austria.
Sidoo kale Booska 6. Wuxuu imanayaa Sweden, France, Portugal, Netherlands & Ireland, 7. Switzerland, United States, United Kingdom, Norway, Belgium & New Zealand, 8. Griiga, Malta, Czech Republic & Australia, kaalinta sagaalaad ee sanduuqa 9aad. Kanada, 10. halka meeshii ugu dambeysay ay gashay dowladda Hungary.
Wadamada kaalmaha hore ka galay ayaa u badan kuwa aan xasilooneyn & Waqooyiga Kuuriya waa wadan ay adagtahay in loo safro, maadaama Pyongyang aysan jecleyn safarka badan, sababo la xiriira feejignaanta dhanka basaasnimada.
Qiimeynta ayaa kala ah: Waqooyiga Kuuriya, Liibiya & Nepal oo kaalinta koowaad ku jira, Falastiin, iyo Soomaaliya & Yemen, Pakistan, Syria, Iraq iyo Afghanistan.